Maalinta: Juun 23, 2019
Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa sheegay inay sameeyeen qorshe cusub si ay ugu fududeeyaan kala guurka maraakiibta ganacsi inay maraan dabaqadaha gaarka loo leeyahay waxayna yiraahdeen, le, qaban qaabadan, sanadka 5 [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay dhiseysaa bir bir casri ah oo isku xireysa isku xirka Köseköy Bridge Junction, kaasoo xiriir la leh xarunta degmada Kartepe isla markaana qaada gawaarida xamuulka wadada Istanbul - Ankara. Waxaa qoray Waaxda Gaadiidka [More ...]
Sababta foosha xun ee Japan ayaa go'aansaday 'Slug Slug'
Bishii hore Japan, waxaa lagu dhawaaqay in gabi ahaanba laga jaray xarumaha tareenka ee laga soo xaday slug. Tareenka 30 iyo joojinta 12 ee saameeya rakaabkii kunka qof ee Kyushu, jasiiradda saddexaad ee ugu wayn Japan, [More ...]
Weerar ku soo qaadey on Tadiifka TCDD ee Saldhigga Icirliova
soo gaabiyay ee Republic of Turkey Tareennada State tareen Station, taas oo ku saabsan Incirliova 'TCDD waxa uu ku yaalaa meesha saxan muujinta, weerar rinji soo gaaray. Dhammaan xarfaha marka laga reebo 'T' ee 'TCDD' ee saxanka, [More ...]
Clio-ga cusubi wuxuu u taagan yahay inuu noqdo Clio-ga ugu fiicnaa abid, oo leh awood wadis firfircoon, maaraynta iyo tayada laga soo bilaabo qaabeynta ilaa wax soo saarka. Jiil cusub, oo casri ah iyo muuqaal isboorti [More ...]
Maanta taariikhda: 23 June 1955 Samsun-Khamiis Arbaco
Maanta taariikhda 23 June 1955 Samsun-Çarşamba ayaa xiran. Khadka ayaa dib loo furayaa 1985.